About Us - Tai'an Puhui Electric Technology Co., Ltd.
Isiteshi ukugelelza umshini
Ubuso bekhompyutha ukugelelza umshini
Khetha & Indawo Machine
Solder Namathisela Iphrinta
Isikhala seso rework Station
Tai'an Puhui Electric Technology Co., Ltd. (abbr: Puhui Technology) sasungulwa ngo Tai'an yesifundazwe Shandong ngo-2007.
Puhui Techology kuyinto nomkhiqizi professional ngokugxila e SMT Machine, Multitemperatual izindawo ukugelelza Solder, Desktop ukugelelza Solder, seso BGA rework Station kanye High-hle Iphrinta. Ngenxa lokuhweba abadumile kulo mkhakha, "puhui" has ukuqaphela okusezingeni eliphezulu futhi zithandwa kakhulu ezimakethe dometic ngamazwe.
Puhui Technology ungumnikazi ikhono eqinile R & D, umklamo, nokukhiqizwa nokuqhutshwa. Njengoba inkampani zobuchwepheshe, sinalo ubuchwepheshe eziningi ezizimele bokusungula, uchungechunge ezinhlanu 25 intellgent Equipments ukukhiqizwa electronic namathuluzi infrared electronic safike CE bangivumele nezinye izitifiketi kakade. Ngesikhathi esifanayo, Puhui Technology sifinyelele nokubambisana namanyuvesi neyaziwayo nezikhungo ngokwesayensi.
Puhui Technology njalo ezahlukweni ngokwayo kumakhasimende ne imikhiqizo yayo eliphezulu nezobuchwepheshe pre-ukudayiswa nangemva-ukudayiswa amasevisi. Kuze kube manje, imikhiqizo yethu kakade ithengiswe emazweni amaningi ezifana Europe, e-USA, eNingizimu-mpumalanga Asia, eMpumalanga Ephakathi, e-Australia nase-Afrika.
Wohushan South Road, Daiyue District, Tai'an Idolobha, Isifundazwe Shandong, China
Small ukugelelza umshini , seso ukugelelza umshini , SMT ukugelelza umshini , nokunamathisela ngomthofu Machine , Lead Mahhala ukugelelza umshini , okuzenzakalelayo Hola Mahhala ukugelelza umshini ,